काठमाडौ। कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरि बोधिनी एकादशीका दिन बिहानैदेखि उपत्यकाका चार नारायण, बूढानीलकण्ठ नारायणस्थानसहित देशभरका नारायण मन्दिर भक्तजनले भरीभराउ रहे । आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरि शयनी एकादशीका दिन क्षीरसागरमा सुतेका भगवान् विष्णु हरिबोधिनी एकादशीका दिन जाग्ने अर्थात् (ब्यूझिँने) धार्मिक विश्वासका साथ पूजाआजासहित आराधना गर्न विहानैदेखि नारायण मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको हो ।
उपत्यकाका चाँगुनारायण, शेषनारायण, इचङ्खुुनारायण र विशङ्खुनारायण मन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्यो । यी नारायण मन्दिरलाई चार नारायण भनिन्छ । चार नारायणको आज एकैदिन पूजा आजा एवं दर्शन गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वासका साथ टाढाटाढाका भक्तजन पनि सवारी साधन रिजर्भ गरेर चार नारायणको पूजाआजा एवं दर्शन गर्न आउँछन् ।
चार नारायणको दर्शन गर्न नसक्नेले उपत्यकाको उत्तरी भेगस्थित बूढानीलकण्ठ नारायणस्थानमा गई पूजाआजा एवं दर्शन गरेमा मनकामना पूरा हुने विश्वास छ । बूढानीलकण्ठमा हरि र हर अर्थात् विष्णु एवं शिवको मूर्ति एउटै ठूलो ढुङ्गामा स्थापना गरिएको छ । मन्दिरमा राति एक बजेदेखि नै भक्तजनको भीड लागेको महन्त निगमानन्द स्वामीले राससलाई जानकारी दिए ।
बूढानीलकण्ठमा शुक्रबारदेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा (कात्तिक २६ गते)सम्म विशेष मेला लागेको छ । जहाँ जलकुण्डमाथि भगवान् नारायण बिराजमान भएको अलौकिक मूर्ति छ । यो मूर्ति हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको समेत भीड लाग्ने गर्छ । आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घरको माठमा रोपी पूजा शुरु गरिएको तुलसीको विवाह दामोदरसँग गरिदिने प्रचलन छ । एकादशीका दिन बिहानै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले स्नान गरी व्रत बस्छन् । आज चामलबाट बनेका परिकार नखाई फलाहार मात्र गर्ने गरिन्छ । आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि पूजाआजा शुरु गरिएको तुलसीको मठमा विधिपूर्वक पूजासहित हवन गरेर चतुर्मास व्रत समाप्त गरिने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
यसैगरी नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको नारायण मन्दिरमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको भीड लागेको पुजारी शिवप्रसाद पौडेलले बताए । यसैगरी यही दिन घरघरमा तुलसीको विशेष पूजा गरिन्छ । यस अवसरमा काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाले इचङ्गुनारायण मन्दिरमा विशेष मेला लाग्ने भन्दै नगरभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
<<< : ट्रम्पलाई २० लाख डलर जरिवाना
नेपाली भू–भाग भारतमा पारेकोविरुद्ध प्रदर्शन : >>>